Alahady 03 Novambra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY NANDRAISANA NY KATEKOMENA "AFAKA" HO MPANDRAY NY FANASAN'NY TOMPO
" Ho avy amin’ny heriny ny Tompo "
« Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo, ry rahalahy; kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompoa amin'ny fitiavana. » (Galatiana 5:13)
Fotoana miavaka amin’ny fiainan’ny Fiangonana Amparibe ny Alahady androany satria nandraisana ireo Katekomen « Afaka » 32 mianadahy ho mpandray ny fanasan’ny Tompo. Misaotra an’Andriamanitra isika noho ny fahavononany nirosoana amin’izany fanekeny amin’Andriamanitra izany sy ny fahasoavana lehibe noraisin’izy ireo androany. « Fa efa nantsoina ho amin’ny fahafahana ianareo ry rahalahy » no tenin’Andriamanitra notononin’ny mpitarika Ramilison Diamondra, mpiomana ho Mpitandrina, teo am-panombohana ny fotoana. Alahady faha-22 manaraka ny trinité izao ary ny lohahevitra vaovao banjinina izao volana Novambra izao dia ny hoe “ Ho avy amin’ny heriny ny Tompo » ary misaotra an’Andriamanitra isika noho izao fotoan-dehibe izao.
Taorian’ny fiarahabana Apotolika dia niarahan’ny mpiara-mivavaka namaky ny Salamo fiderana faha-16 : 7 -11 dia noredonina avy eo ny hira faneva ny faha-200 taonan’ny Sekoly FJKM “Mahareta”.
Tao amin’ny vavaka fidera sy fisaorana dia nambarany fa tonga eto isika hisaotra sy hidera, ny zavatra rehetra nataon’Andriamanitra dia tsara avokoa. « Nasehonao, hoy izy, ny herinao lehibe, heniky ny fahasoavanao isan’andro, misaotra satria nitehirizanao ireto mpanomponao niofana nandritra ny herintaona ary rariny sy hintsiny raha atolotray anao ny dera. Irinay mba ny hitovy endrika amin’ny Zanakao, hahazo hery izahay noho ny fanatrehanao ary aoka hanana fifantohana feno, tehirizo amin’ny zavatra rehetra ho saina iray sy vava iray no hankalazanay an’Andriamanitra. »
Ny sitrapon’ Andriamanitra izay natolotra androany dia noraisina tao amin’ny Salamo 89:13 « Manan-tsandry mahery Hianao; Mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. » sy Jaona 8:36 « Koa raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. » sy 2 Korintiana 3:17 « ary izay itœran’ny Fanahin’ny Tompo no itœran’ny fahafahana. » Ny hira ao amin’ny fihirana fanampiny 2 “He manolo tena ho Anao” and. 1,3 no natao avy eo.
Raha nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika dia nanambara hoe “ Ianao Andriamanitra ô no fiandohana sy fiafarana ary tsy manan-petra ny fitiavanao, koa mitondra ny heloka tsy araka ny sitraponao izahay, ny tananao dia miasa amin-kery. Izahay dia mitady hery hafa nefa Ianao mpanafaka amin’ ny ratsy rehetra, raha mandini-tena izahay dia tsy nampiasaina tamin’ny tokony izy ny fahafahana anananay noho ireo ota rehetra ireo, noho izany dia diso izahay fa mampisaraka aminay aminao izany. Tsy mitahiry fahatezerana aminay Ianao fa diovinao na tahaka ny jaky na koa mangatrakatraka tahaka ny sily azan y fahotanay. Nohiraina ny FFPM 408 : 1,2 Jehovah Ray mahari-po
Ny Teny famelan-keloka dia noraisiny tao amin’ny Salamo 89:28 « Hitahiry ny famindram-poko ho azy mandrakizay Aho, Ary ny fanekeko hampaharetiko aminy. » sy Jeremia 33:7-8a « Ary ny Joda sy ny Isiraely dia hampodiko avy amin’ny fahababoany, ka haoriko ho toy ny taloha izy. Ary hodioviko ho afaka amin’ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko; Ka havelako ny helony rehetra, izay nanotany sy niodinany tamiko. » Nohiraina ny hira ao amin’ny Fihirana fanampiny 7 “Tsy hainay hangina “ dia notononina ny fanekem-pinoana 1
FOTOANAN'NY SEKOLY ALAHADY
Ny zoky Toky ao amin’ny K3 o nanolotra ny fotoanan’ny Sekoly alahady ary ny teny ao amin’ny Hebreo 12:14 « Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay. tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo. » no natolony.
Na ny olona tsy fantarao aza dia tokony hitadiavanao fihavanana. Raha manana toetra mendrika an’I jesoa Kristy dia resao am-pitsikiana izy, nefa mangataha ny Fanahy Masina hitari-dalalan mba ho araky ny sitrapon’ Andriamanitra izany. Ataovy hita fa olon’I Jesoa Kristy ianao ka hita taratra amin’ny ataonao. Nohiraina ny hira FFPM 761 : 3 “Indreto izahay Jesoa” dia nisy vavaka.
Nanao ny anjara hirany ny Taninketsa avy eo.
Teo am-panombohana dia noarahabain’ny mpitantsoratry ny Fiangonana Andrimbazotiana Andry ireo vahiny tonga naira-nivavaka.
Avy any ivelany :
Avy amin’ny Departemantan’ny Mpiasa sy vola : Alahady 10/11/19 Fanompoamm-pivavahana sy fiofanana ho an’ny Mpitandrina sy Vaoùieran’ny fanana ao amin’ny Fjkm Ambatomena
Toera-panomanana Mpitandrina Ambatonakanga Fankalazana an’Andriamanitra sy fanolorana ny delegasiona pastoraly ny Alahady 10/11 Katedraly analakely
Anio ny fihaonam-be ny Diakona sy Loholona ao Analakely
Concert mozika litorjika ao amin’ny Paroisse Andohalo 10/11 amin’ny 16h Rakitra no ho tatazana karakarain’ny sampan Mpiangaly Zavamaneno hotronin’ny STK Rantsana mozika Aumonerie Soavinandriana. Manantena antsika fatratra izy ireo
Fanentanana amin’ny teti-bola 2020 araka ny fanentanana averina amin’ny 10/11 .
Jean Jacques Rabako Ralambonirina dia nanao fanentanana momba ny fitsangatsanganana : Sabotsy 09/11 Ivaivola Ivato Làlana acropolle taloha. Fihaingana 7:30 1.000AR isan’olona ny saran-dàlana, fiara : 1.000 AR saran’ny parking. Rano sy sakafo no entina, misy nofon-kena mitampiavanana, mila manao akanjo maivana hanaovana fanatanjahantena. Misy ny trano eva misy ny sakafo. Asaina manokana ny katekomena ho raisina sy ny fianakaviany.
Raha nanao ny fanentanana ny Mpitandrina Raharijaona dia niarahaba manokana ny katekomena Afaka, mamporisika amin’ny fitsangatsanganana, namoaka sefala mpitoriteny sy katekisa maro isika tamin’ny 01/11. Andiany « hery » izy ireo ary mirary soa azy ireo. Manentana ireo izay vonona amin’taompianarana vaovao. Antso ho an’ny fisoratana amin’izay hiomana ho mpitandrina. Mpanompon’Andriamanitra nanorina ny fanambadiany.
Vita izay dia nisy ny fifampiararian-tsoa toy ny fanao amin’ ny fotoan-dehibe toy izao, ka ny teny fifampiarahabana dia hoe “Hamonjy anao anie Jehovah Andriamanitra mahery”
Niarahaba ireo tratry ny tsingerintaona Oktobra izay nasaina nitsangana ary ny teny ny Soratra Masina nomena azy dia 2 Petera 1:3 « Efa nomen’ny herin’Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra amin’ny fahalalana Ilay niantso antsika tamin’ny voninahiny sy ny fahatsarany ». Nentina am-bavaka izy ireo. Nanao rakitra alitara sady nohiraina ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 20, Feno toky ny Fanahy,
Niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana sady fanononana ireo voady sy raki-pisaorana avy amin’ny mpianakavin’ny finoana. Ny hira nangatahin’izy ireo dia ny hiran’ny RFF “Tompo ô fantatrao”, Ffpm 452/1, FF 26/3,FFPM 489/3, FFPM 204/1, FF29/1, FFPM 627/1, Antema 16, FFPM 2/1, Largo (Smzm). Ny hira nanolorana ny rakitra dia ny FFPM 4: 4 “Mamy re ny Tomponay”. Ny katekomena “Afaka” dia nanolotra panneau d’affichage filter ho an’ny Fiangonana.
Natao ny hira Ffpm 224/1,2 “Tafavory izahay, ka manatona Anao”mialohan’ny vavaka sy famakiana ny Soratra Masina Habakoka 2:1-4, Marka: 14: 60-64, Hebreo : 10: 35-39 . Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bado no nitaribavaka. Hoy izy tao amin’ny vavaka nataony hoe “ faly izay fiangonana noho izao fotoana sarobidy sy manokana izao, misaotra noho ireto zanakao vonona hanao fanekena tsara ny ho mpandray eo anatrehanao. Misaotra omenao ny Teninao ho jiro sy fahazavana ny làlana, aoka izany teninao izany no hahatsapanay fa Andriamanitra manafaka ny Andriamanitra itomponay. Satana dia te-hangeja anay nefa noho ny herinao dia ireto izahay antsoinao, ataovy tsapanay fa manafaka ny Teninao na inona na inona mamatotra anay. Ataovy manana fifaliana izahay mamaky ny Teninao sy hihaino ny hafatrao. Mitenena ianao Jesoa Tompo araka ny fombanao.
Ny hira Ffpm 164/1,2 “Jesosy irery ihany” no nohiraina avy eo mialoha ny toriteny.
Ho avy amin’ny heriny ny Tompo ! “Fa efa nantsoina amin’ny fahafahana ianareo ry rahalahy.” Izany no handraisana ny hafatra amin’izao fotoana sarobidy izao . Ny anarana “afaka” no entin’ireto katekomena ho raisina ireto arakya ny ao amin’ny Galatiana 5 : 13a. Ny teny afaka dia voarakitra amin’ny soratra grika izay nampiasaina tamin’ny Testament Vaovao izay nampiasaina in-telo ambitelopolo. Ny heviny dia afaka, votsitra, tafatsaoka, voahaisotra , ny farany dia hilazàna fa nisy fangejana nanjo nefa tafàla tamin’izany.
Ho avy amin’ny heriny ny Tompo, izany no lohahevitra mandritra izao volana Novambra izao. Inona no fonosin’nizany herin’ny Tompo izany ? Mbola misy fanampiny dia hery sy hoe rahon’ny lanitra : entina hilazana ny maha Andriamnitra Tsitoha eo amin’ny fahefany sy ny fiandrianany. Hita ao amin’ny Daniela 7:9 sy 13 izany ary Salamo 110:1 sy ny manaraka. Sarin-teny nambaran’i Jesoa hilzany ny fihaviany, mandevina ny fahavalon’Andriamanitra, manapotika ny hery ratsy rehetra, mandevona ny herin’ny maizina. Rehefa manambara izany i Jesoa Kristy dia milaza ny maha mpamonjy azy, Izy no Mesia. Zavatra roa no asehon’nyy Galatiana 4 :
1-	Afaka tamin’ny fanjakan’ny haizina ary tafafindra amin’ny fanjakan’ny mazava noho ny herin’ny Tompo .
Fahafahana mahagaga io satria avy amin’Andriamanitra ho an’ny olona voafidiny sy izay efa nantsoiny. Mahagaga satria rehefa jerena ny fiainan’i Adama sy Eva dia tsy afaka tamin’ny fanjakan’ny haizina izy ireo noho ny filàn’ny nofo.
Tsy misy hahafaka amin’ny fanjakan’ny haizina raha miankina amin’ny herintsika irery ihany isika. Andriamanitra no tonga mamindra ny olona avy any amin’ny fanjakan’ny haizina ho any amin’ny fanjakan’ny mazava noho ny fitiavany ho an’ny olona izay tiany omena. Fahasoavana avy amin’Andrimanitra izany, fahasoavana mahagaga. Ny finoantsika no entintsika misitraka izany fahafahana mahagaga izany. Ny Ray no mitaona ireo efa nofidiany hanatona an’i Jesoa. Noho ianao voahantso ka notaominy hanatona an’i Jesoa dia fahafahana mahagaga izany.
Izay efa mino, manana an’i Jesoa,eo an-tananan’ny Ray, dia tsy misy maharombaka.
Tsarovy fa iray amin’ny blasfemia ny fihemorana. Manentana antsika mba hiharitra hatrany amin’izay efa niantson’ny Tompo antsika. Mamptandrina antsika izany tenin’Andriamanitra izany. Tano tsara io fahafahana omen’ny Tompo anao io, mahazotoa mivavaka, miasa amin’ny tahotra sy ny hovitra manaraka ny sitrapon’Andriamanitra, atolory ny Tompo ny tenananao. Na ho anao efa natao batsia izany, na ho anao efa mpandray ny fanasan’ny Tompo na vao ho raisina, ho anao Diakona : entanina hifikitra mafy amin’izany fahafahana mahagaga izany fa fanehom-pitiavan’Andriamanitra izany.
2-	Afaka amin’ny famatoran’ilay ratsy ka manompo an’I Kristy amin’ny fifaliana oho ny fandreseny ny fahavalo rehetra.
Izaho sy ianao hisitraka tanteraka izany fahafahana izany. Resin’ny Tompo ny devoly, ilay liona mierona mitady izay harapaka. Izany fahafahana sarobidy izany dia efa noraisintsika, efa nomen’Andriamanitra maimaimpoana. Ny finoana no tanana handraisana ilay fahafahana sarobidy izay fanehoan’Andriamanitra fandresena.
Tsy voageja’ny ratsy intsony fa mpanompo amin’ny fifaliana isika koa mazotoa fa aza malaina amin’ny asa fanompoana nametrahany anao, antso ho anao hirotsahanao amin’ny lalindalina kokoa fa tsy fantatrao izay avoakan’ny ampitso. Aza mangatak’andro. Matokia ny herin’ny Tsitoha ary aoka hamoa voa mendrika izany fahatokiana iznjy amin’izay ady ataonao.
Tsy hamela anao ho irery ny Tompo. Apetrao Aminy mandrakariva ny fiainanao, ny fikasanao, ny fanahianao, ny fanirianao dia ahafahanao mahazo ilay fahfahana. Mazotoa amin’ny asa fanompoana hampandrosoana ny habaindain’Andriamanitra. Aza mba ho isan’ny malaina na kamo ! Aoka isika ho olona feno fanoloran-tena ho an’ny Tompo mandrakariva. Hifikiro ny Tompo hahatonga anao ho mpandresy. Tazomy mafy Kristy ary mangataha amin’ny isan’andro hihazonanao ilay fahafahana mahagaga. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.
Tao amin’ny vavaka nataony dia hoy ny Mpitandrina “Isaoranay Ianao satria tia anay, mialoha anay isan’andro amin’ny fitiavanao. Miantso anay ianao ho amin’ny fanafahana amin’ilay ratsy , manolotra anay ny fifaliana amin’ny fandresena. Feno finoana sy fanantenana amin’ny fahatokiana Anao, na dia mpanompo tsy mahasoa aza izahay, mahatsiaro ny fahafahana sarobidy efa natolotrao anay izahay.” Nivavaka izy ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory ny Filazantsara fa ho avy amin’ny herinao Ianao hoy izy, ny kristiana eto amin’ity fitandremana, ny mpiara mivavaka, mba hanana faharetana amin’ izany fahafahana izany amin’ny fotoana rehtrea, ny amin’ ny asan’ny Fiangonana amin’io herinandro io, ny fitsangatsanganana. Nentiny am-bavaka ny manana fikasana hanao Sefala, ny hiomana ho mpitandrina, ny katekomena izay ho raisina sy izay zandriny handimby azy, ireo manana hataka manokana ka ka manantena valim-bavaka, ireo ray amandrenin‘ny Fiangonana , ny Filohan’ny Fjkm, Sekretera Jeneraly sy tompon’andraikitra rehetra, ho arovao amin’ny herinao tsitoha, ireo sahirana, marary mana manjo, voan’ny tsindry hazo lena. Sitrana izy, omeo fiononana. Nentina am-bakana ireo nanatanteraka voady, tsaroany koa ny nanao raki-pisaorana ary nitrotro am-bavaka ireo nanana fangatahana manokana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Ny Hasin’ny Famonjena no nanao ny anjara hirany avy eo “Hiara-mandeha Aminao hatrizao”.
Niroso tamin’ny fandraisana ho isan’ny tenan’I Kristy ireo katekomena andiany “Afaka” 32 mianadahy izay nasaina nitsangana. Nisy ny vavaka dia niroso teny amin’ny alitara izy ireo sady nanao ny hira Ffpm 446/ 1,2 “Atolotro ho Anao” Novakiana ny Tenin’ny Soratra masina “ Izaho no mpiandry tsara, raha misy olona ta-hanaraka ahy; aoka izy handà ka hanaraka Ahy…” Nangatahina izy ireo hamaly ny fanekena ilain’ny Fiangonana dia nasaina nanao ny fanekeny niaraka avy eo . Niroso tamin’ny fandraisana azy tsirariray avy eo. Vita izany dia nasaina nitsangana ny Fiangonana ary nentin’ny Mpitandrina am-bavaka ireo vao noraisina. Ny hira Ffpm 295:1,2 no nataon’ny mpandray rehetra , ny andininy faha-4 nohirain’ny mpandray vaovao ary ny andininy faha-3 nataon’ ny fiangonana manontolo. Nanatanteraka ny hira nomaniny ny andiany Afaka dia ny hira “Misaora an’I Jehovah fa tsara Izy” (John RAJAOFETRA).
FAMARANANA NY TAPANY VOALOHANY AMIN’NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA
Ny Hira FFPM 537:1 no natao mialoha ny nanononana ny tondrozotra sy nanolorana ny tsodrano dia nohiraina ny hira FFPM 539: 1 nofaranana tamin’ny amena nohiraina.
Ny Largo an’I Haendel izay nangatahin’na mpianakavin’ny finoana no natao feon-javameno fivoahana.
Ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy mpiomana ho Mpitandrina Ramilison Diamondra no niara-nanatanteraka ny fampandraisana. Ny Hira ao min’ny fihirana fanampiny 23 “Andriamanitra ô, ry Tompo Zanahary” no natao teo am-panomboahana notohizana tamin’ny fanehoana sy ny vavaka sy ny fihirana ny Antema 1 « Masina masina masina ». Novakiana ny Teny fanorenana ary natao ny fanamasinana. Taorian’ny hira FF 8 « Masoko manganohano » sy ny vavaka fahatsiarovana sy fanetren-tena dia natao ny fanasana sy ny fizarana. Ny hira hohiraina nandritra ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka dia ny Hiran’ny finoana 39, ny Hira Ffpm 254 sy 107
Teo am-panatazana ny rakitra dia ny fihirana fanampiny 91 ary taorian’ny haftra sy ny tsodrano dia ny Hira Ffpm 335:1,2
Ny feon-javameno famaranana noredonin’ny mpitendrin’ny Sampna Mpitendry zavamaneno dia “Rindra” an’ dRamarokoto S.A.D
Ny teo amin’ny fanamafisam-peo sy nandray feo ny toriteny dia Jonathan Randriamananaro, ny teo amin’ny fàfana dia Rakotonarivo Vatsy, ny mitendry orga dia Irimanana Eninkaja niaraka tamin’ny mpitendrin’ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno nanafana ny fotoana.
Naka ny sary : RAMAHERY Hasina . Nandray an-tsoratra: RAJAOFETRA Seta